Inethiwekhi Ephephile Yekhamera Yomzimba | Izixazululo ze-OMG
Inethiwekhi Ephephile Yekhamera Yomzimba ye-Worn-Worn
I-synopsis yekhamera egqoke umzimba:
Ukuphila esikhathini sobuchwepheshe bamadivayisi athuthukile, izinsiza zakamuva ziye zaba yisidingo sehora lokuqinisekisa ukuphepha nokuphepha komphakathi. Ikhamera egqokwa ngumzimba iyithuluzi elincane umuntu angalinquma ngekhola noma ephaketheni ngenkathi abanye benokubanjwa ngozibuthe. Umuntu angakwazi futhi ukusakhela isigqoko sokuzivikela noma izingilazi. Ibhethri lale divayisi yesimanje lihlala isikhathi esingaphezu kwamahora we-6 kuya kuma-8 ngokuqoshwa okuphezulu kwekhwalithi ephezulu. Ingarekhoda nama-video ebusuku noma endaweni emnyama. Kunconywa kakhulu kubasebenzi bezokuphepha.
Ukusetshenziswa kwekhamera egqokwa ngumzimba kunethiwekhi ephephile kuHulumeni:
Eminyakeni embalwa edlule, kuye kwaba sobala impela ukubona ukusetshenziswa kwe-inthanethi okwandayo. Ngokufanayo, kulesikhathi samanje, noma ngubani angalayisha kalula ividiyo ezwakalayo kumapulatifomu amaningi futhi aqale ukusakazwa bukhoma. Kulokho, ikhamera egqokwa Umzimba iba yinethiwekhi ephephile kuHulumeni kanye nazo zonke izinzuzo nezinzuzo zayo. Uma sikhuluma ngokuphepha nokuphepha, abaphathi bezokuphepha noma izisebenzi zamaphoyisa ziyeza engqondweni. Manje ohulumeni abaningi bezwe benza impoqo ukuthi amaPhoyisa Amaphoyisa nabasebenzi bezokuphepha bagqoke ikhamera egqoke umzimba. Lobu buchwepheshe bamuva bubenza bakwazi ukuqopha noma yisiphi isigameko esenzeka endaweni yecala lobugebengu noma ngesikhathi sengxoxo ejwayelekile ngemuva kwanoma yisiphi isixwayiso sokuphepha. Lokhu kusiza kakhulu ukukhulisa ukuqaphela kanye nokubeka sobala ekusebenzeni nobugebengu nezaziso zezokuphepha.
Kodwa-ke, lawo makhamera athanda ukuthandwa amakhamera agqokwa uMzimba asesigabeni sokuqala kodwa kancane kancane iba yimishini ejwayelekile eMnyangweni Wamaphoyisa nengxenye yokugqoka kwamaPhoyisa Amaphoyisa ezweni lonke. Amacala amakhulu wephrofayili ephezulu alethe lobu buchwepheshe endaweni engaphambili futhi andisa ukuthandwa kwawo. Manje amakhamera agqokwa ngomzimba asephenduke umkhuba omusha emphakathini osebenzisa umthetho. Ama-ejensi wokuqinisa umthetho asondela nezinhlelo zokushayela ukuze ahlole ukusetshenziswa kwawo.
Isiqinisekiso Senethiwekhi Evikelekile Kahulumeni:
Ikhamera egqoke umzimba iqinisekisa kanjani inethiwekhi ephephile kahulumeni? Ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba kufakazela ukucacisa nokuzimela kweminyango yamaphoyisa. Ucwaningo luveze ukuthi ukuthuthuka kufike ekusetshenzisweni kwamaphoyisa ngokusebenza kwamakhamera agqokwa ngomzimba. Lokhu kukhulisa ukuqashelwa phakathi kwamaphoyisa. Bazi kakhulu ngezenzo zabo kanye nokusebenzisana nomphakathi jikelele futhi mancane amathuba okuwela umugqa phakathi kokusebenzisa amandla adingekayo ukubamba abasolwa kanye nokusebenzisa kabi amandla okusobala.
Ucwaningo oluvela emithonjeni ehlukene luye lwabonisa ukuthi lapho abantu bazibona bengaphansi kokuhlolwa kokuziphatha kwabo kuzoshintsha. Lapho bezibona bengaphansi kokuqashwa nokuqoshwa kwamakhamera agqokwa ngomzimba baba ngabanomthwalo wemfanelo futhi baguqule ukusebenzisana kwabo nomuntu oqopayo. Ubufakazi obuqoqwe bukhombisa ukuthi abantu abathile, abaqaphela iqiniso lokuthi iso lekhamera liyababuka, bamukela ukuziphatha okwamukelwa kakhulu noma okuzithoba ikakhulukazi uma umbukeli eyinhlangano eqinisa umthetho. Kunezikhathi eziningana emsebenzini wephoyisa lapho umuntu ambophile kanye nokuziphatha akwethulayo endaweni yesehlakalo kuba umehluko omkhulu lapho bobabili behlangana enkantolo yezinkantolo ukuze kuqulwe icala. Ummangalelwa ogqoke kahle okhuluma ngokukhanyayo uhlukile kakhulu kunesidakwa ebesibandakanyeka empini futhi eboshelwe ibhethri. Abaphenyi babhekisisa ukuthi uma inkantolo ibona ividiyo iqopha lo mbono kuzohluka kakhulu. Kungakhungathekisa kakhulu ukufika enkantolo ukuthola ummangalelwa egqoke umfaniswano egqoke umfaniswano nokuziphatha kwengilosi ohluke ngokuphelele kumuntu oboshiwe. Ngokusebenzisa ikhamera ukufaka umlingiswa nesimo sangempela salowo muntu kungasiza kakhulu uma kuziwa ecaleni.
Kanye nezinguquko ezikhona zokuziphatha, ezinye izinzuzo eziqondakalayo zamakhamera agqokwa umzimba wezinhlangano ziyancipha izikhalazo zezakhamizi nokusetshenziswa kwamaphoyisa kwezigameko zempi. E-2012, uMnyango wamaPhoyisa waseRialto, ngokubambisana neCambridge University e-United Kingdom, wenza isifundo unyaka nonyaka ngemiphumela kanye nemithelela yamaphoyisa ayegqoke amakhamera omzimba. Isikhathi esingaphezu konyaka, kunikezwe amakhamera ahlukahlukene okushintshana ngamakhamera ngenkathi amanye engekho. Ucwaningo lwaluyisampula eyindida yamashifu ahlukene ngezikhathi ezahlukahlukene ocwaningweni. Ngemuva kwesikhathi sonyaka, imiphumela yamangalisa. Amaqembu anikezwe amakhamera omzimba abe nokuncishiswa kwezigameko zokusebenzisa amandla nge-60% kusuka ngonyaka wokuqala. Ucwaningo luphinde lwabika ukuthi izikhalazo zezakhamizi mayelana nalelo qembu elifanayo zincishiswe yi-88% ngaphezulu kwezinqumo zangonyaka owedlule. Isikhulu Samaphoyisa aseRialto sithe ukwehliswa kwesibalo sezikhalazo kubangelwa ukuthi abaphathi baziphatha kangcono noma izakhamizi ziziphatha kangcono, mhlawumbe bekuyinto encane kubo bobabili.
Kokunye ukuhlola okwenziwa ngamakhamera agqokwa ngomzimba inethiwekhi ephephile nokuthi yehlisa kanjani izikhalazo zezakhamizi, uMnyango Wamaphoyisa aseMesa wenze ucwaningo lonyaka ikakhulukazi egxile ekunciphiseni izikhalazo. Uhlelo lokushayela lwalunamaqembu amabili; Amaphoyisa okuhamba nge-50 anamakhamera abelwe amakhamera kanye ne-50 ngaphandle kwamakhamera omzimba. Womabili la maqembu ayefana emisebenzini eyabelwe yokuqapha kanye nokwanda kwabantu. Lolu cwaningo, olwenziwe ngokubambisana ne-University of Arizona, lufingqe ukuthi amaphoyisa abaphethe ngaphandle kwamakhamera omzimba abenezikhalazo eziphindwe kathathu zezakhamizi. Ngaphezu kwalokho, lolu cwaningo luphinde lwaphetha ngokuthi amaphoyisa abephethe amakhamera agqoke umzimba anokwehliswa kwe-75% ekusebenziseni izikhalazo zamandla kanye nokwehliswa kwe-40% yezikhalazo zezakhamizi ngonyaka owedlule lapho kwakukhona amakhamera omzimba ayisetshenziswa.
Zombili lezi zifundo zifakazele ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba avikela inethiwekhi kahulumeni ngoba imiphumela ethusayo ichaza ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba anciphisa izikhalazo zezakhamizi. Lokhu kungenxa yokuthi ngokwengxenye kufanele kuziphathe zombili izinhlangothi kusuka ekuvukeni kokuqoshwa kwesigameko. Isikhulu samaphoyisa aseGreensboro uKen Miller sithi sikhuthaza abaphathi bethu ukuthi bazise abantu ukuthi baqopha ngoba sicabanga ukuthi kuphakamisa isimilo kuzo zombili izinhlangothi zekhamera.
Ukuqoshwa kwevidiyo kusuka ezikhulwini ezisebenzisa amakhamera agqokwa ngumzimba nakho kungasetshenziswa ukulungisa izinkinga zangaphakathi zomnyango. Futhi iyithuluzi lokuqeqesha eliwusizo. Ocwaningweni lwakamuva oluvela emaphoyiseni e-Police ezweni lonke mayelana nokusetshenziswa kwevidiyo yekhamera yomzimba, ama-94% abaphendulile athi ayisebenzisa ukuze ibukezwe abaphathi ukulungisa indlela yokuziphatha kwamaphoyisa noma njengethuluzi lokuqeqesha. Ividiyo yekhamera yomzimba inenani elikhulu lezibonelo zokuqeqesha. Ngenkathi kubuyekezwa ukwakhiwa, abaphathi bangahlola izinqubomgomo zamanje futhi banqume ukuthi ingabe izibuyekezo kufanele zenziwe ngokususelwa ekuhlolweni kwezipho zangempela. Umnyango wokuqeqesha ungakhiqiza izimo ezithile eziqondile zokuqeqesha izikhulu zawo ngokususelwa kwizingcingo zangempela enkundleni. Ngaphezu kwalokho, ukuqeqeshwa kwamaphoyisa manje kungaqondana ngqo ne-ejensi eyodwa noma umnyango wezangaphakathi.
Mhlawumbe enye yezinzuzo ezinkulu ekusetshenzisweni komthetho kuzobe kungukuthwebula futhi kube nemibhalo ebhaliwe yophenyo lobugebengu. Futhi, kungenye ithuluzi elingasiza ekulweni kwecala lezigebengu. Lapho izikhulu ziphendula endaweni yesehlakalo eyisigebengu esikhulu, iningi lokugxila kwazo nokukhathalela kokuqala ukuthola indawo nokusiza izisulu ngezindlela zosizo lokuqala. Lapho beqala izingxoxo zabo futhi bezama ukuhlanganisa ngokwenzekile, kunzima ukucabanga ngayo yonke imininingwane. Ngokusebenzisa ikhamera egqoke umzimba, iphoyisa lingarekhoda okwenzekile nemininingwane yemizuzu eminingi ebingaphuthelwa. Njengoba behamba bezungeza indawo yobugebengu, bayiqophile njengoba bekunempendulo yokuqala. Leli thuluzi linganikeza ingcebo yolwazi kubaphathi abavame ukufika kahle ngemuva kweqiniso lapho kuthule futhi kungaphuthumi. Umphathi wamaPhoyisa kaDalton uParker uthi ngokungafani namakhamera asemotweni, amakhamera agqokwa ngomzimba aqopha konke okwenzekayo njengokuhamba kwamaphoyisa endaweni yesehlakalo futhi enza inhlolokhono nabantu abaningi. Amakhamera agqokwa ngomzimba abelusizo olukhulu ekusindisweni kwemininingwane efanele.
Abashushisi bendawo bayakhuthazwa futhi nezinhlangano ezibandakanya amandla ukuthi zisebenzise lobu buchwepheshe. Ukuba nerekhodi levidiyo elizokwethula enkantolo ngokuvamile kunzima ukukuvikela. EKentucky ,ummeli wendawo uvikele ukusetshenziswa kwevidiyo yekhamera egqoke umzimba. Kwenza kube lula ngabo ukuthi baqonde isikhalazo esingenzeka kungenzeka ukuthi basizakale kakhulu, ngoba awufuni iphaneli lamajaji ukuthi likubone lokhu. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi emacaleni odlame emndenini lapho ubufakazi bevidiyo bunikezwe enkantolo. Izikhathi eziningi, ikakhulukazi uma kukhona uhlaka lokuhlukumezeka futhi abahlukunyezwa besaba, abafuni ukucindezela amacala. Ukubutha ubufakazi kunzima kakhulu. Kuhlanganiswe nezisulu ezingenalusizo nokulingwa cishe akunakwenzeka. Ngokuhlinzeka abashushisi ngobufakazi bevidiyo lapho befika endaweni yesigameko, kuzodonsa umkhuba wokuziphatha kwabazizisulu nabasolwa kanye nanoma yikuphi ukulimala okugcinwe. Ukuhlinzeka lolu lwazi kubashushisi, bangakwazi ukwakha icala ngisho noma isisulu sinqaba ukucindezela amacala noma senqaba ukunikeza isitatimende. U-Chief Miller waseTopeka uthe uma sikhombisa abasolwa emacaleni odlame emndenini kuqoshwa ama-video aqhamuke kumakhamera agqoke isidumbu, babevame ukuvuma ukuthi umsolwa akanacala ngaphandle kokuya enkantolo.
Ukufingqa, ikhamera egqoke umzimba ixazululele izingqinamba eziningi nokukhathazeka kwabezomthetho abasebenza ngezomthetho futhi ibe inethiwekhi evikelekile kahulumeni.
Inethiwekhi Ephephile Yekhamera Yomzimba ye-Worn-Worn igcine ukuguqulwa: Okthoba 9th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4255 Ukubuka kwe-1 Namuhla